घर पुस्तक र यसको इतिहास
घर पुस्तक 18 औं शताब्दीमा देखा पर्नुभयो। र तिनीहरूले शहर को हरेक भाग मा पुलिस स्टेसन को निजी प्रहरी अधिकारीहरू द्वारा माथि कोरिएका र प्रशासनिक रेकर्ड गर्न belonged थिए। त्यो समय, यो कागजातको मद्दत संग मा पहिले नै फेला परेन वा व्यक्तिको गर्न सकिन्छ।
समारोह चकलेट पुस्तकहरू आज सम्म संरक्षित। लेखा नमूनाहरू लागि नै हो रूसी संघ र कानून मा enshrined। कम्तिमा एक पटक हरेक सम्पत्ति कारोबार सञ्चालन गर्ने नागरिक, तिनीहरूले एक घर रजिस्टर र निकाल्ने यो हो थाहा छ। प्रदान जो अचल सम्पत्ति को प्रेरित, सूची घर देखि एक निकाल्ने, (उदाहरण, खरिद र बिक्री, को वासस्थान को पुनर्निर्माण लागि दर्ता अनुमति, आदि को लागि) एकदम व्यापक छ।
मात्र त्यहाँ एक घर रजिस्टर छ कि हालत मा, यो सम्भव दर्ता वा यो आवास पहुँच भएका व्यक्ति को सूची मद्दत प्राप्त छ। संग अचल सम्पत्ति घर रजिस्टर विभिन्न अपरेसन पूरा को प्रक्रिया मा (थप सही - यो एउटा अंश) उपलब्ध अन्य संग हुनुपर्छ सँगै शीर्षक को कागजातहरू। ढोका-किताब नागरिक स्वामित्वमा dwellings मा मा चेक पायो छ। सामान्यतया आवास विभाग र होआ, यो राखिएको (यदि अपार्टमेन्ट भवन मा दर्ता) वा निजी घरमा को मालिक को हातमा।
घर पुस्तक issuing वा प्रतिस्थापन जब राहदानी तल सबै आवश्यक चिन्ह राख्न आदेश उपलब्ध छ कि एक आवश्यक कागजात छ। साथै, हरेक घर सम्पत्ति को मालिक मा (जस्तै उपयोगिता) भुक्तानी संख्या गणना को प्रक्रिया मा निर्णायक महत्व पुस्तक छ।
कि लाभ को सबै प्रकार, र को आवास को निजीकरण र दर्ता अधिक - त्यहाँ पटक एक व्यक्ति पुस्तकको घर देखि एक निकाल्ने आवश्यक जब छन्। कसरी प्रश्न चिन्ता छैन एक निकाल्ने प्राप्त गर्न घर बाट, तपाईं यस बयान जानकारी भुक्तानी केन्द्र मा लेखिएको छ भनेर थाहा गर्न आवश्यक छ। यस संस्थाको भण्डारण र ढोका-किताब सम्पत्ति बाहिर छ।
त्यहाँ घर देखि बयान दुई प्रकारका छन्:
- सामान्य। यो हालको मिति को अनुहार मा कोठा मा दर्ता बारेमा मात्र जानकारी छ।
- विस्तारित। यसलाई कहिल्यै क्षेत्रमा रेकर्ड गरिएको छ जो सबै नागरिक पहिचान।
घर रजिस्टर शुल्क कानून देखि एक निकाल्ने को जारी लागि (संघीय स्तरमा) परिभाषित छैन। यसलाई स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थापित गर्न सकिन्छ।
विवरण वैधता औपचारिक कारण र विशिष्ट संगठनको आवश्यकताहरु निर्भर जो यो प्रदान गरिएको छ गर्न। सामान्यतया यो दुई हप्ता देखि एक महिना छ।
तसर्थ, भविष्यमा समस्या र कानुनी महत्त्व यो कागजात छ के विचार सबै प्रकारका जोगिन गर्न, यो आवश्यक कानुनी नियमहरु संग सख्त अनुसार घर रजिस्टर बाहिर बनाउनु हो। यो देश को एक नागरिक को एक राहदानी महत्त्वपूर्ण रूपमा कागजात भएकाले र सधैं सुरक्षित र ध्वनि हुनुपर्छ।
को नागरिक काम के हो?
विशेषताहरु, नियम र सिफारिसहरू: सपिङ्ग सेन्टर को डिजाइन
मास्को र मस्को क्षेत्र मा विकास कम्पनीहरु: सूची र समीक्षा
उद्योग विशेषज्ञता रूसी क्षेत्रहरु
Lobachevsky विश्वविद्यालय Nizhny Novgorod को। विश्वविद्यालयहरु Nizhny Novgorod
आफ्नो हातमा गेराजमा निकासी
मोटरसाइकल "कावासाकी निन्जा 600" (कावासाकी निन्जा): विनिर्देशों, वर्णन, समीक्षा
रक्सी "Otard": वर्णन, इतिहास, संरचना, र रोचक तथ्य
आफूलाई रूपमा सपनामा बोसो हेर्नुहोस् - यो कस्तो अर्थ राख्छ?
"मौन जासूस": को बित्दै जाँदा खेल। "Nensi Dryu: द मौन जासूस"